बोर्ड सदस्य ऋषिराम दाहाल भन्छन्- ‘क्यान आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री भाे’ 'चित्त नबुझेका कुरा राख्दैमा खेलाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं'
जनतापाटी बिहीबार, पुस ८, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो एक साता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले चार खेलाडीमाथि गरेको कारबाही विवादमा परेकाे छ । क्यान, खेलाडी र समर्थक मात्रै हैन, गठबन्धनको सरकारले समेत यो घटनालाई निकै चासोका साथ हेरेको छ ।
क्यानको २९ मंसिरमा बसेको बोर्ड बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कमलसिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय सम्झौताबाट ६ महिना बाहिर राख्ने र कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । यसपछि चारै खेलाडीले क्यानलाई कारबाही पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै उनीहरुलाई सहयोग गर्दै अन्य खेलाडीले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले स्वेच्छाचारी ढंगले क्यान चलाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको, प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विराेध सुरु भएकाे छ ।
यी नै विषयमा क्यानका सदस्य ऋषिराम दाहालसँग जनतापाटीले गरेको अन्तर्वार्ताः-
तपाईसहित ६ बोर्ड सदस्यले खेलाडीको कारबाही फिर्ता होस् भन्ने माग राख्नु भएको छ । आवश्यक थियो ?
–तीन महिनापछि हामी ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछौं । यसअघि हामीले जुन लेभल-१ प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई जोगाउनुको ठूलो चुनौतीको विषय हो । यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई खेल खेलाउन प्रोत्साहन, प्रेरित गर्ने समयमा खेलाडीमाथि कारबाही गर्दा हाम्रो लेभल जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? र, खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अधम्य अपराध गरेका हुन् ? त्यो विषय आउनुपर्‍याे । उनीहरूले चित्त नबुझेका कुरा राख्दैमा खेलाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
क्यानले खेलाडीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै हुन् भनेको छ । तपाईहरूकाे कुरा फरक देखियाे नि ?
–हामी खेलाडीसँग टचमा छैनौं । खेलाडीले अनुशासन भंंग गरे कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । अनुशासनको कारबाही सबैको पक्षमा छ । बोर्डले आफूले गरेका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुको साटो खेलाडीमाथि प्रहार गर्नु भयो । कसैलाई कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्छ । खेलाडीले खेल्ने हो, राजनीति गर्ने हैन । लेभल वान जोगाउनु छ । यो ठाउँमा पुग्नु हाम्रो गन्तव्य हो । खेलाडीले यी यी कुरा चाहिन्छ भनेर माग गर्दा माग राख्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
–१४ खेलाडीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । हामीलाई सहयाेग गर्नुभयाे भने राम्रोसँग खेल्न सक्छौं । नेपालको नाम राख्न सक्छौं । हामी लेवल वान जोगाउन सक्छौं भन्नु कसरी दबाब भयाे ? यदि यो भएको वा गरेको हो भने, जबर्जस्ती हस्ताक्षर गरेका हाैं भन्ने खेलाडी आउनुपर्‍याे । क्यानका पदाधिकारीले धम्काएर खेलाडीलाई जबर्जस्ती खेलाडीकै विरुद्धमा बोल्न लगाएको सुन्नमा आएकाे छ। खेलाडीकै विरुद्ध क्याम्पेन गर्न लगाएको, दुनियाँ ठाउँबाट दबाब दिएको भन्ने सुन्नमा आाएकाे छ ।
–क्यानलाई पेलौ भन्ने कुरै हैन । हामी पनि क्यानको एक पाटो हो । हामी पनि बोर्ड मेम्बर हो । गलत कुराहरू हुँदा हाम्रो मत सानो भयो होला । तर गलत कुराहरूलाई गलत हो भन्ने, भन्न पाउनुपर्छ नि । त्यसका लागि हामीले कुरा उठाएको हो ।
–हामीले कुरा उठाएका छौं । यो कुरा कहाँ जान्छ । यदि जिल्लाको अधिवेशन नगरी साधारणसभा गराउनु पर्छ भनेर क्यानको बहुमतले भन्छ भने हामी यही कुरा लिएर साधारणसभामा लगेर हाम्रो कुरा प्रस्तुत गर्छौं । सहभागी नहुने, बहिस्कार गर्ने, राजीनामा दिने भन्ने कुरा हाम्रो हैन । हामी त्यहीँ बस्छौं । क्यानलाई लाइनमा, पद्धतिमा ल्याउन उहाँहरूसँग बसेर अगाडि बढ्छौं ।